Warshadda Warqadda gariiradda | Soo -saareyaasha Sheet Coil China, Alaab -qeybiyeyaasha
Xarig naxaas ah oo ku saleysan naxaas elektrolytka, zinc iyo walxaha raadraaca ah oo ah alaab ceeriin ah, iyada oo loo marayo ka -shaqaynta ingot, rogid kulul, duubid qabow, daaweynta kuleylka, nadiifinta dusha, goynta, dhammeynta, ka dibna xirxirida.
Waxqabadka hababka wax -qabadka, baaxadda, sifooyinka farsamada, iska -caabbinta daxalka, waxqabadka iyo daasadda wanaagsan.
Waxaa si weyn loogu adeegsaday korontada, baabuurta, isgaarsiinta, qalabka, qurxinta iyo warshadaha kale.
Xariijinta naxaasta waa naxaas leh daasad, aluminium, iyo walxaha raadraaca sida alaabta ceyriinka ah, iyada oo la adeegsanayo soo -saarid, duub kulul, qabow la duubay, daaweynta kuleylka, nadiifinta dusha, goynta, dhammeynta iyo xirxirida, agabyada leh wax -soo -saarka sare, xoogga daalka, guryaha laastikada iyo qaabka foorarsiga oo aad u fiican.
Warqadda Copper waxaa laga sameeyey naxaas elektrolytka ah, iyada oo loo marayo ka shaqaynta by ingot, rogid kulul, rogid qabow, daaweynta kulaylka, nadiifinta dusha, goynta, dhammeynta, ka dibna xirxirida.
Dhuuxa Naxaasta ee Looxa Macdanta
Waxyaabaha loogu talagalay jir -leedhka waxaa had iyo jeer laga sameeyaa daawaha naxaasta, Birta iyo fosfooraska, ama naxaas, nikkel iyo silikoon, kuwaas oo leh tirooyinka guud ee C192 (KFC), C194 iyo C7025. iyo KFC waxay u badan yihiin wakiilka naxaasta, birta iyo fosfooraska, waa agabka caagga ugu badan.
Xarkaha naxaasta ah waxaa laga sameeyey naxaas elektrolytis ah, iyada oo loo marayo ka shaqaynta by ingot, rogid kulul, rogid qabow, daaweynta kulaylka, nadiifinta dusha, goynta, dhammeynta, ka dibna xirxirida.
Maaddadu waxay leedahay kuleyl aad u fiican iyo koronto, ductility dabacsan iyo iska caabinta daxalka wanaagsan. Waxaa si weyn loogu adeegsaday korontada, baabuurta, isgaarsiinta, qalabka, qurxinta iyo warshadaha kale.
Daawaha naxaasta-nikkel wuxuu ka samaysan yahay naxaas, bir, nikkel, zinc iyo walxaha raad-raaca, iyada oo loo marayo ka-baaraandegga, duubitaan kulul, duub qabow, daaweyn kuleyl, nadiifinta dusha, goynta, dhammaynta, xirxirida iyo hababka kale. badeecadu waxay leedahay dhalaal qurux badan, kuleyl aad u fiican oo qabow iyo qabow, ductility, iska caabinta daxalka, iska caabin daal, dabacsanaan sare, guryaha korontada iyo farsamada iyo waxqabadka gaashaanka.
Qurxinta Strip Copper
Naxaasku wuxuu u adeegsan jiray walxaha qurxinta taariikhda dheer. Sababtoo ah maaddadu waxay leedahay ductility dabacsan iyo iska caabin daxalka oo wanaagsan. Waxa kale oo ay leedahay dusha dhalaalaya iyo dhisme xoog leh. Way fududahay in lagu midabeeyo wakiilka kiimikada. Waxaa si baaxad leh loo isticmaalayay samaynta albaabada, daaqadaha, dharka, qurxinta, saqafyada, derbiyada iwm.
Xaashka naxaasta ah
Waraaqda naxaasta ah ee ku saleysan naxaas elektrolytka, zinc iyo walxaha raadraaca sida alaab ceeriin ah, iyada oo loo marayo ka -shaqaynta ingot, rogid kulul, duudduubid qabow, daaweynta kuleylka, nadiifinta dusha, goynta, dhammeynta, ka dibna xirxirida. Waxqabadka hababka wax -qabadka, baaxadda, sifooyinka farsamada, iska -caabbinta daxalka, waxqabadka iyo daasadda wanaagsan.